Arrimaha sababi gaartay xog ku saabsan SSD
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka SSD daaqadaha
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka SSD on Mac
Faraqa u dhexeeya SSD iyo HDD drive adag
Adag State Drive, si wayn loogu yaqaanno SSD, waa qalab lagu kaydiyo xogta in uu leeyahay kiniisadaha sida xusuusta circuit isku dhafan ah. Waxay leedahay badalay oo dhan cajaladaha magnetic electrometrical jir. Tani waa tiknoolajiyada casriga isticmaala interfaces elektaroonik ah oo interfaces cusub I / O sida Sata, ayaa loo abuuray si wax looga qabto loo baahan yahay ee SSD. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Ma jiraan qaybo dhaqaaqaan farsamada sida marka la barbar dhigo drives disk adag ama kumbiyuutarka.
Saxannada badan yihiin adkaysi u dodo iyo masiibooyinka jirka.
Way ka sii aamusan, yar qarsoon oo ka hooseeya markii ay helaan yihiin.
Drives Hybrid waxaa la abuuray isticmaalaya SSD iyo HDD si loo hagaajiyo waxqabadka.
Arrinta khasaaro Data dhibay isticmaala si joogto ah. Tani waa waxba u qaban la SSD laakiin waxaa jira arrin kala duwan in ay saamayn. Liiska waxyaabaha sababi gaartay xog ku saabsan SSD:
Marka drive waa jidh ahaan burburay, waxaa laga yaabaa in aad lumiso xogta aad.
Haddii tago in ay la tacaalaan drive gacanta hoos goobaha sare, dhowr goobaha qaldan keeni kartaa xogta lumin.
On heerka software, markii weerar virus dhacdaa xog badan oo ku lumen karaa.
Waxaa jira sababo badan oo kale oo keeni kara xogta lumin sida kharash arrin iwm
Maanta, dhammaan SSD daaqadaha nidaamka isticmaalka. Maaddaama ay wax sabab ah oo aad laga badiyay xogta, ayaa waxaa jira siyaabo oo aad dib u soo ceshano karo xogta. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad dib u soo ceshano xogta Hubi in aanad wax ku qorin wixii xog ah in SSD ka dhigi, taas oo ka dhigi karta wax aan macquul ahayn inuu ka soo kabsado xogta.
Isku day inaad hesho in Recycle Bin Haddii aad isticmaalayso desktop Windows, markaas dhammaan xogta la tirtiro tagaa in dib loo warshadeeyo Bin. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay tahay oo kaliya xogta, taas oo la tirtiray iyadoo la isticmaalayo kaliya tirtirto doorasho ama tirtirto button. Haddii aad u isticmaashay wareejin + tirtirto doorasho files waxaa si toos ah u la tirtiraa warbixintaa oo iyana ma waxaa laga helaa bin Recycle. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku soo kabsadaan xogta ka recycle bin:
Tag in dib loo warshadeeyo bin on your computer. Sida caadiga ah waa on desktop.
Haddaba tag in faylka aad rabto in la soo celiyo. Midig u guji ku yaal oo taga si ikhtiyaar soo celiyo.
3 tallaabo inuu ka soo kabsado xogta lumay ka SSD drive adag iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery
Wondershare Xogta waa mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan xogta ka SSD daaqadaha. Xitaa haddii aad tirtiray ka recycle bin ama wareeg file tirtiray, waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado isticmaalaya software this. Aad ayey u awood in ay soo kaban karto xogta xitaa haddii SSD lagu weeraray fayras, ama qaar ka mid ah waxyeelo kale. Waxaad ka soo dejisan kartaa website Wondershare Wondershare Data Recovery. Raac saddex tallaabo inuu ka soo kabsado xogta ka computer uu furmo suuqa aad.
Marka hore loo soo dajiyo iyo aan bilowno dib u soo kabashada wondershare boggayaga Windows. Hadda dooranayaan lumay kabashada file u version daaqadaha.
Hadda waxa aad qaadan doonta shaashada ku xigta meesha aad yeelan doontaa in ay doortaan drive SSD ka meesha aad rabto inuu ka soo kabsado file ka. Xaaladdan oo kale waa SSD dibadda, drive adag aad hubiso in aad ku xidhmaan your computer ka hor la bilaabay software ah. Just guji SSD ah.
Hadda ku eegaan natiijada la marsiiyey. Raadi file aad rabto in aad soo kabsado iyo hubiyo tayada. Hadda hubi files in aad rabto in aad soo kabsado. All inaad samayso waa guji soo kabsado.
Dhammaan faylasha u soo meesha la doonayo on your computer iyo aad ordi karaan faylasha si aad u hubiso haddii ay ku jiraan xaalad wanaagsan.
Haddii aad isticmaalayso MAC ka dibna waxa ay sidoo kale waa ay fududahay in la helo tirtiray ka qashinka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si joogto ah la tirtiro shil, ka dibna waxaan u baahan tahay habka kale oo ka mid ah inuu ka soo kabsado xogta lumay, laakiin weli waxaa jira hab noocan ah soo kabsado badiyay xogta. Halkan waxa ku jira laba siyaabood oo aad u soo kaban karto, xogta laga badiyay ka SSD on Mac
Isku day inaad hesho qashinka Mar kasta oo aad tirto faylasha ka aad Mac waxay tagaan qashinka. Waxay dhab ahaan aan la tirtiro ka computer ay halkii laga saaro goobta in ay qashinka. Tani waxay run haystaa oo kaliya haddii aad tirtiray isticmaalo ikhtiyaaraadka tirtirto. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u isticmaashay wareejin tirtirto, files la gebi ahaanba laga saaro doonaa, oo idinka computer. Maaddaama ay qaar ka mid ah virus ama cillad kale, haddii xogta lumo, ma jirto si aad u bogsan karaan qashinka. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku soo kabsadaan files ka qashinka:
- Waxaad ka heli kartaa Trash icon on desktop ama aad Dick, kaliya waxa ay ku abuurtaan.
- Hadda aad loo soo bandhigi doonaa liiska faylasha qashinka. Dooro file aad rabto in la soo celiyo oo wuxuu oofin click midig. Dooro dib ugu celi.
File waxaa laga soo celiyay doonaa meeshiisii ​​asalka on your computer.
3 tallaabo inuu ka soo kabsado xogta lumay ka SSD drive adag iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery for Mac
Haddii ay dhacdo in aad si buuxda u lumay files ka yimid Mac, ha ka welwelin, waxaad weli heli kartaa faylasha aad dib. Tallaabooyinkan waxay keliya oo la samayn karo haddii SSD lagu hayaa oon doorsoomaynin oo aan jir ahaan si xun u dhaawacay.
Waxaad isticmaali kartaa dib u soo kabashada Data Wondershare u Mac. Software waa fududahay in la isticmaalo oo kuu ogolaanaya in aad ka bogsato oo dhan cayn kasta oo files idiin aad Mac. Tayada faylasha kale waxaa lagu hayaa halka kabashada laakiin waa keliya haddii files ka dib markii baaritaan ku jiraan xaalad wanaagsan. Halkan waxa ku jira saddex tallaabo inuu ka soo kabsado xogta SSD aad ku Mac.
Ku rakib ka Wondershare kabashada Data iyo ordi on your computer. Haddaba tag in lumay Recovery File.
Hadda waxaad yeelan doontaa in ay doortaan SSD ka taas oo aad rabto inuu ka soo kabsado disk ah. Haddii ay gudaha u la soo daabici doonaa, laakiin haddii ay tahay samaynaysaa dibadda u hubiso in aad u xidhmi doontaa Mac ka hor inta aadan abuurtaan software ah. Hadda riix kaliya disk aad rabto iskaan.
Hadda waxaa si toos ah iskaan doona faylasha tirtiray aad disk iyo waxa kale oo aad ku eegaan karo files si aad u hubiso xaaladda faylka. All inaad samayso waa hubi faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna riix on kabsado.
Waxaad ka arki kartaa files soo kabsaday aad Mac. Ku helaan iyaga oo aan arko haddii ay ku jiraan xaalad wanaagsan.
Faraqa u dhexeeya SSD iyo HDD (qiimaha, awoodda maximam, Speed, qaybsanaanta, Assal iwm)
Price- Waxay guud ahaan qaali u yihiin ka dibna HDD maadaama ay yihiin foomka ugu dambeeyey adeegsanaya farsamada casriga ah.
Tayo SSD leeyihiin awoodda ugu badan ee 4TB A.villa. Si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin kuwo aad u qaali ah oo aad u qaali ah.
Speed- SSD waa ka dhakhso badan HDD. Waxay kabaha karo computer celcelis ahaan in ka yar daqiiqad.
Fragmentation- Iyadoo SSD ma jiraan wax dhibaato ah kala qaybsanaanta sida aysan meesha files ee ku kaydsan yihiin disk ah
Durability- Sida ay jirto qaybo dhaqaajin karo lilke HDD waxaa laga ilaaliyo qodobo waxyeello kala duwan oo ka shaqeyn karaa waqti dheer.
Price- HDD ka raqiisan yihiin markaa SSD sida ay Qiimo qeybtii on SSD.
Waxay tayo ma laha awood sare sida HDD sida iyagu ma ay isticmaali gobollada isku dhafan oo ku siinaya awood dheeraad ah oo lagu kaydiyo.
Speed- HDD jirin kulan si xawaaraha SSD. In kastoo gaabis ah ay yihiin degdeg ah oo ku filan in shuqulka oo dhan lagu fudud oo dhaqso uga dhigi.
Fragmentation- Sida ay dhamaadka joogto ah u isticmaalaan si ay u jiheysan nidaamka kaydinta jirto dhibaato joogto ah kala qaybsanaanta in SSD.
Durability- ay u isticmaalaan qeybo ka mid farsamo taas oo u guuraan, iyo waqti ay aad u burburay sabab u tahay lama filaan ah ama wax kale. Sidaa awgeed, way ka yar yihiin waarta markaas SSD.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo sameeyo a soo kabashada xogta SSD fudayd?